Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy Gio S5660 6
Mgbọrọgwụ Galaxy Ace s5830i
Mgbọrọgwụ Galaxy Nexus i9250
Mgbọrọgwụ Galaxy Ace s5830
Mgbọrọgwụ Galaxy Gio s5660
Mgbọrọgwụ Galaxy Obere s5570
Mgbọrọgwụ Galaxy S3 I9300
Mgbọrọgwụ Galaxy S4
Mgbọrọgwụ Galaxy Tab27.0
Mgbọrọgwụ Galaxy S i9000
Mgbọrọgwụ Galaxy S2 i9000
Mgbọrọgwụ Galaxy S3 Obere
Chọrọ kwụsịrị gị Galaxy Go S5660? Ị na-na na-nri ebe ugbu a. Isiokwu a bụ banyere ịkọrọ gị na nzọụkwụ nke Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Gio S5660. Dị nnọọ agụ zuru ọdịnaya na-eme ya nditịm site na-eso ya.
Special dee: Nke a ndu bụ nanị n'ihi na Samsung Galaxy Gio S5660. Don 'mgbalị iji na-agbalị ya ndị ọzọ ntị, ebe ọ bụ na o nwere ike na-emepụta mmebi ekwentị gị.
Tupu ị na-eme ihe ọ bụla ọzọ, na-agụ ma na-eme ihe n'okpuru mbụ:
1. dịrị ga ndum ekwentị gị akwụkwọ ikike, wee jide n'aka na ị na-ama mara ya.
2. Ndabere nile data na ekwentị gị iji zere data ọnwụ (otú ndabere Android ekwentị data).
3. Ego na-egosi na batrị nke ekwentị gị bụ karịa 70%.
4. Na ị na-na gị onwe gị n'ihe ize ndụ nke dịrị gị Galaxy Gio S5660.
Ebe ọ bụ na ị na-ama nabatara ha niile, ka-esi ruo dịrị ọrụ ugbu a.
Nga download ngalaba
Download mgbọrọgwụ ngwugwu n'ihi na gị Galaxy Gio gt-S5660 ebe a.
Nzọụkwụ 1. ngwaọrụ gị kwadebere
Mbụ, jide n'aka na ị na-na na nyeere USB debugging na ekwentị gị. Dị nnọọ elele ya ebe a: Setting> Ngwa> Development> Lelee na igbe n'ihu USB Debugging.
Mgbe ahụ jikọọ ekwentị gị na kọmputa site na eriri USB, na idetuo ngwugwu na ị na-na na ebudatara mbụ ka mgbọrọgwụ ndekọ nke SD kaadị na ekwentị gị.
Nzọụkwụ 2. Access Iweghachite ọnọdụ na ekwentị gị
Tụgharịa ekwentị gị anya na-amalite inwe n'ime Iweghachite ọnọdụ ugbu a. Press Mpịakọta Up + Home + Ike n'otu oge na ekwentị gị. Mgbe ihuenyo amama on, hapụ buttons ozugbo. Mgbe ahụ, ị na na na na Iweghachite ọnọdụ.
Nzọụkwụ 3. Ibu Ibu gị dịrị ngwugwu iji wụnye ya
Mgbe ị ga-esi n'ime Iweghachite ọnọdụ, họrọ Mee update ụdị mpụga nchekwa Ibu Ibu gị dịrị ngwugwu nke ị ebudatara n'ihu. Jide n'aka na ị na-adịghị unzip ngwugwu. Dị nnọọ họrọ ya na pịa Ike button n'ịkwado nwụnye.
Nzọụkwụ 4. Nkpọrọgwụ gị usoro ugbu a
Ọ ga-ewe gị a nkeji ole na ole maka echichi. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike na-aga azụ reboot usoro ugbu a. Ọ ga-ewe gị a nnọọ mgbe, ma mgbe ọ reboots, ekwentị gị e ọma gbanyere mkpọrọgwụ.
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy Obere S5570
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S2 i9100 na Android 2.3.6
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Galaxy S3 Obere I8190 / I8190L / I8190N / I8190T
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S3 I9300 on XXUFMB3 Android 4.2.1
3 Mfe Nzọụkwụ na Nkpọrọgwụ Nexus 6
Olee otú idozi Soft Bricked akporo ekwentị
> Resource> Nkpọrọgwụ Atụmatụ> Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy Gio S5660